Lamesa noely 25/12/2015 : Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Araka ny tantara tamin’ny Sasakalina dia nivoaka ny didy: tsy maintsy soratana any an-tanindrazany ny olona tsirairay avy amin’ny fanisam-bahoaka. Rehefa tonga tany Betlehema tananan’I Davida anefa dia tonga ny fotoana hiterahan’I Maria. Tsy nisy toerana intsony ny tranom-bahiny ka tranon’omby no natoron’ny olona azy ireo ka tany no teraka Ilay Mpanjakan’izao tontolo izao. Raha miteny isika hoe tranon’omby anefa dia tsy ny omby ihany no mitoetra ao fa na ny akoho amam-borona na ny fitaovana isan-karazany toy ny angady, sns… dia ao avokoa no apetraka. Nolazaintsika tamin’ny Sasakalina ihany koa fa indraindray ataontsika toy ny fitaovana Andriamanitra, rehefa voadona isika vao mitady Azy. Fitaovana satria rehefa misy zavatra ilaintsika ihany isika vao mitodika amin’Andriamanitra. Rehefa mikorontana ny fiainantsika, mikorontana ny fiainan-tokantrano, rehefa marary na miditra hopitaly, rehefa tojo fahoriana mila tsy hahatraka intsony… izay isika vao mitady hoe aiza Ianao Andriamanitra. Raha mbola izany no fiarahantsika amin’Andriamanitra dia mbola any an-tranon’omby foana I Jesoa hatramin’ny androany satria ataontsika toy ny fitaovana Izy ka rehefa ilaina dia tadiavina fa rehefa vita kosa ny ilàna azy dia hapetraka. Koa samy mandinika isika hoe aiza no anaovako an’I Jesoa? Mbola ao an-tranon’omby ve? Talohan’ny ho torontoronina an’I Jesoa anefa i Maria dia hoy ny Anjely taminy hoe hiteraka zazalahy ianao ka ny anarany atao hoe Emanoela izany hoe eo amintsika Andriamanitra. Izany no tokony ho izy amin’ny fiainantsika Kristianina: eo amintsika mandrakariva Andriamanitra. Na ao anatin’ny manahirana, na ao anatin’ny hafaliana, indro eo anivontsika mandrakariva Izy.
Tohin’ny Evanjelin’ny Sasakalina ny Evanjelin’ny Noely: I Jesoa teraka ao an-tranon’omby ary mandry eo amin’ny fihinanam-bilona. Izany hoe eo amin’ny toerana hihinanan’ny omby. Tamin’ny taona lasa isika nilaza fa ny dikan’ny anarana hoe Betlehema dia “tranon’ny mofo” (maison du pain). Ny omby moa tsy mihinan’olona dia izay no tsy nihinanany an’I Jesoa fa isika olombelona kosa no mihinana an’I Jesoa. I Jesoa ilay Teny tonga nofo, nofo tonga mofo ary mofo zary aina ho antsika. Araka ny Tenin’I Jesoa dia izay mihinana sy misotro no hanana ny fiainana mandrakizay. Araky ny Evanjely dia nisy andian’olona mpiandry ondry tany an-tsaha. Ny fomba fanao tamin’izany dia mpiandry ondry maromaro no miaraka ary ny mpiandry ondry tamin’izany dia ondry an’arivony na an’aliny ny andiany andrasana. Ny ondrin’ireo andiana mpiandry ondry maromaro miaraka ireo dia apetraka anaty vala iray. Rehefa maraina ny andro dia mivoaka ny mpiandry ary ny andian’ondriny manaraka azy. Mahalala ny mpiandry azy ny ondry ka tsy mivoaka raha tsy ny mpiandry azy no mivoaka. Ny mpiandry ondry dia isan’ireo olona sahirana satria tsy tompony izy fa mpikarama fotsiny ary voahilika eo amin’ny fiaraha-monina fa lazaina ho isan’ny mpangalatra. Any an-tsaha mantsy raha te-hihinana mangahazo izy dia manongotra mangahazon’olona izay hitany eny. Ny tsy nampoizina anefa dia ireo olona mahantra sy voahilika ireo no nisehoan’ny anjely voalohany nilazàny ny Vaovao Mahafaly.
Ny dian’ireo mpiandry ondry ireo no tsara hodinihintsika ka ny dingana voalohany tamin’izany dia ny fandraisana ny hafatra, ny fandraisana ny Vaovao Mahafaly. Toy izany ny fiainantsika Kristianina: isak’alahady isika mandray ny Vaovao Mahafaly aty am-Piangonana miaraka amin’ny fanazavana izany Tenin’Andriamanitra izany. Io Vaovao Mahafaly io no nolazain’ny anjely tamin’ny mpiandry ondry. Ny dingana faharoa dia ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly. Rehefa avy nandray dia mitory toy ny nataon’ny mpiandry ondry nilaza tamin’I Maria sy Josefa: “nilazan’ny anjely izahay, indro teraka any Betlehema ny Mpamonjy an’izao tontolo izao”. Amin’ny fotoana famakiana ny Evanjely dia mamaly isika hoe “Voninahitra anie ho Anao ry Tompo” sady manisy lakroa amin’ny andrina sy eo amin’ny vava ary eo amin’ny fo. Ny eo amin’ny andrina dia midika ho fandraisana ny Tenin’Andriamanitra. Raha tonga any am-Piangonana nefa tsy mahatadidy akory na dia ny Evanjely novakiana aza dia mitovy amin’ilay voa nafafy teo amin’ny arabe, tsy nisy fotoana nitsiriany akory dia efa notsaingoan’ny vorona dia lasa. Ny eo amin’ny vava dia midika hoe vonona hitory ny Vaovao Mahafaly tahaka ireto mpiandry ondry nilaza izay henony avy tamin’ny anjely tamin’I Maria sy Josefa. Izany akory tsy midika hoe hamoaka “sono” isika hitoriana Vaovao Mahafaly fa mety misy olona marary tsy nandeha nivavaka manontany hoe inona ny Evanjely na inona ny fampianarana androany, mety hisy fifampizarana any amin’ny APV any… Inona moa no hotorianao raha ianao ary tsy nihaino tsara tany am-Piangonana. Rehefa mitory koa anefa dia araka izay nambara taminao ihany no tokony hambaranao koa, tahaka ny nataon’ny mpiandry ondry, fa tsy manitatra na mampihena. Ny fihetsika fahatelo nataon’ireo mpiandry ondry ireo dia ny fiainana ny Vaovao Mahafaly: izany no lakroa fahatelo ataontsika eo amin’ny fontsika amin’ny Evanjely, izany hoe, manao azy am-po sy miaina azy. Atao eo amin’ny fo izany satria izay be ao am-po ihany mantsy no aloaky ny vava. Toy ny nataon’ny mpiandry ondry nandeha nidera an’Andriamanitra rehefa avy nitsaoka an’I Jesoa sy nitory ny Vaovao Mahafaly.
Dingana telo izany no arahintsika: ny voalohany mandray ny Vaovao Mahafaly, ny faharoa mitory ary ny fahatelo miezaka miaina izay Vaovao Mahafaly noraisintsika izay. Ireo no lalana nizoran’ny mpiandry ondry rehefa nihaona tamin’I Jesoa. Tsy ampy ny mandray fotsiny fa tsy maintsy mizara isika. Tsy mety koa anefa ny mizara fotsiny nefa tsy nandray akory fa mampiana-diso ny hafa. Koa enga anie izao fankalazantsika ny fetin’ny Noely izao hanokatra lalam-baovao eo amin’ny fiainantsika ka tsy ho fifaliana ivelany fotsiny ihany fa hafaliana tahaka ny hafalian’ny mpiandry ondry nandray ny Vaovao Mahafaly ka nidera an’Andriamanitra nandritra ny fiainany tontolo. Aoka ho tanteraka izany amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
Alahady – 14/09/2014 – Toriteny
Alahady – 01/11/2014 – Toriteny